Izingubo – iAfrika
Asho ukuthini amaphupho ngezingubo? Lokhu kuhlanganisa ukushisa izingubo, izinkinobho, amajazi, ukotini, ingubo yokugqoka, amaduku, izigqoko, ukuba nqunu, izingubo ezingcolile, itshali, izicathulo, usilika, amabhulukwe, izingubo zangaphansi neveyili.
Ukuphupha uthenga izingubo ezintsha
Leli yiphupho elithokozisayo kakhulu kubantu bonke uma sibheka lokho elisuke likubikezela. Liyibika lokushintsha kwempilo ngendlela engcono kunaleyo umuntu asuke ekuyo. Kafushane nje singasho sithi libikezela inqubekela phambili, inhlanhla, izibusiso noma impumelelo. Nansi enye incazelo lapho umuntu ephupha ngokuthenga.
Tags Izingubo, Ukuthenga
Amaphupho ngezingubo zangaphansi
Uma uphupha ukuthi ugqoke izingubo zangaphansi kusho ukuthi uzothola izindaba ezinhle maduze. Kepha uma izingubo zangaphansi zingcolile futhi zidabukile uzozithola usenkingeni nomthetho.
Amaphupho ngezingubo ezindala noma ezingcolile
Uma uphupha ukuthi unikwe izingubo ezingcolile noma ubuzwe ukuthi uwashe izingubo kodwa amanzi angcolile kusho ukuthi kukhona ozama ukuthakatha umuzi wakho. Amaphupho ngokuwasha izingubo. Amaphupho ngokungcola nokuhlanzeka.
Amaphupho ngokulahlekelwa yizingubo
Uma uphupha ukuthi ulahlekelwa izingubo noma iqoqo lamagugu yibhadi uma ungakwazi ukuzithola lezizinto. Uma ukwazi ukuzithola ephusheni kusho ukuthi usuyihlulile into embi.
Amaphupho ngokushisa izingubo
Uma uphupha ngokushisa izingubo zakho kusho ukuthi impilo yakho izoba ngcono. Kodwa uma ugcina umlotha kuzoba nezinkinga ezikutholayo.
Uma uphupha ukuthi usebenzisa iphinifa maduzane nje uzonikezwa into okade uyifuna.
Amaphupho ngengubo yokulala encane
Uma ubona ingubo yokulala encane kusho ukuthi uzohlangana nomngani omdala noma uphathina okade wagcina ukumbona.
Uma uphupha ukuthi ubona izingubo zokulala kuyibhadi ikakhulukazi ehlobo futhi uzobhekana nezinkinga.
Amaphupho ngokuwasha izingubo
Uma uphupha ukuthi uwasha izingubo qaphela kusho ukuthi kungenzeka ulahlekelwe yinto ebalulekile kuwe maduzane. Amaphupho ngezingubo ezindala noma ezingcolile. Amaphupho ngokungcola nokuhlanzeka.